Samaynta nooc - Mestech Industrial Limited
Samaynta nooc waa in la sameeyo hal ama dhowr shaybaar iyada oo loo eegayo sawirka naqshadeynta alaabada ama rimidda, iyada oo loo marayo habab gaar ah oo loo maro, sida ku cad shuruudaha muuqaalka sheyga iyo qaab dhismeedka iyada oo aan lahayn wax soo saar.
Nooca noocyadiisu waxay u dhowdahay sida sheyga dhabta ah qaab ahaan, midab ahaan iyo qaab ahaanba. Waxaa loo adeegsadaa in lagu xaqiijiyo in cabbirka isku dhafka cabbirka uu yahay astaamaha, muuqaalka, astaamaha midabka iyo qaar ka mid ah astaamaha wax soo saarka ee alaabooyinka cusub ee la qaabeeyey inay sax yihiin oo macquul yihiin, ama in la tuso alaabada macaamiisha si ay u helaan fikradaha macaamiisha ama aqoonsiga suuqa.
Wareegga nolosha badeecaddu wuxuu ka bilaabmayaa naqshad wuxuuna ku dhammaanayaa suuqa. Naqshadeynta alaabtu waxay qeexaysaa shaqada, muuqaalka iyo isku halaynta alaabada. Go'aaminta habka iyo qiimaha badeecada. Naqshadeynta alaabtu waa shaqo adag, oo la xiriirta guusha badeecada oo dhan. Laga soo bilaabo naqshadeynta wax soo saarka illaa soosaarkii ugu dambeeyay, nooc kasta oo badeecad ah oo loogu talagalay wax soo saar ballaaran ayaa u baahan inay maal gasho lacag badan, waqti iyo tamar badan. Naqshadeynta wanaagsan ayaa fure u ah guusha wax soo saarka. Soo-saarista noocyada alaabada ah si loo falanqeeyo, loo xaqiijiyo loona hagaajiyo naqshadeynta wax soo saarka waa hab muhiim ah oo lagu heli karo naqshadeynta wax soo saarka kaamil ah. Wax soo saarka guddiga gacanta ayaa si wax ku ool ah u horumarin kara xawaaraha wax soo saarka
Wax soosaarka guud ee warshadaha, sida elektaroniga, qalabka korontada, gawaarida iyo aaladaha caafimaadka, waxaa laga sameeyaa balaastig, qalab ama waxyaabo elektaroonig ah. Si looga fogaado qashinka halista ah ee caaryada wax soo saarka baaxada leh iyo wax soo saarka ay keeneen khaladaadka naqshadeynta, waxaan samaynaa muunado tusaale ah oo qiimo yar ku maraya mishiinka, sameynta laser iyo caaryada ku meel gaarka ah iyo qaabab kale oo falanqeyn, isu imaatin iyo qiimeyn ah, ama aan tusno macaamiisha.
1. Soo saarista gacanta ee biraha moodeelka: waxaa jira saddex dariiqo oo waaweyn oo loo sameeyo qaab qayb bir ah
(1). Birta xaashida ah: foorarsiga, goynta, ka bixitaanka iyo garaacista gacanta ama qalabka fudud. Habkani waxaa badanaa loo adeegsadaa samaynta qaabka qaybo bireed xaashi qafiif ah. Qalabka la adeegsan karo waxaa ka mid ah birta, aluminium ka samaysan, daawaha naxaasta ah iyo zinc.
(2) Mashiinka CNC: shiidida, leexashada, shiida, soo saarida iyo qodista qalabka birta ee qalabka mashiinka. Qaabkan waxaa loo isticmaalaa soosaarka noocyada baloogga iyo masafka, mararka qaarkood godadka ama dhammaystirka maxalliga ah ee moodooyinka birta sidoo kale waxay u baahan yihiin in la farsameeyo. Qalabka la adeegsan karo waxaa ka mid ah birta, aluminium ka samaysan, daawaha naxaasta ah iyo zinc.
(3). Daabacaadda biraha 3D ee birta (sintering): Daabacaadda Birta 3D waxaa loo isticmaalaa in lagu soo saaro qaybo leh qaabab adag iyo qaab-dhismeedyo ay adag tahay in lagu soo saaro mishiinka iyo ka-baaraandegga birta, sida mashiinnada mashiinnada, caagagga biyaha qaboojiya ee caaryada iwm. birta iyo birta martensitic, ahama birta ah titanium iyo daawaha titanium, aluminium daawaha ah, nickel base alloy, cobalt chromium alloy iyo copper alloy alloy
2. Noocyada caaga ah: waxaa jira saddex dariiqo oo waaweyn oo lagu sameeyo noocyo caag ah:
(1) .CNC machining: taasi waa, marinta caaga ah waxaa lagu farsameeyaa qalabka mashiinka. Qaabkan waxaa loo adeegsadaa makiinadda qolofta, baloogga iyo meertada jirka. Lagu dabaqi karo ku dhowaad dhammaan walxaha adag ee balaastigga ah.
(2). Daabacaadda Laser 3D iyo sintering (SLA iyo SLS): SLA waxaa loo isticmaalaa in lagu sameeyo noocyada qaybaha adag ee muuqaalka iyo qaabdhismeedka adag ee CNC, inta badanna la adeegsado qalabka ABS iyo PVC ee loo yaqaan 'resensensitive resin'. Sameynta leysarka SLS sidoo kale wuxuu ku habboon yahay balaastikada jilicsan ee TPU oo aan lagu shaqeyn karin CNC, iyo caagagga injineernimada sida nylon.
(3) .Dufcad yar oo si dhakhso ah ugu tarma miskaha silica (oo ay kujiraan buuxinta faaruqinta iyo cirifka): nidaamkani wuxuu qaadanayaa tusaalaha ay farsameeyeen CNC ama lagu daabacay laser 3D asal ahaan, wuxuu shubay tiro cayiman oo ah silica silica silica, ka dibna wuxuu durayaa Balaastiig dareere ah oo ku jira godka caaryada ee silica. Daaweynta ka dib, jarjar silica silica si aad u hesho qaybaha balaastigga ah. Qalabka loo isticmaalo in lagu sameeyo qaybaha waa ABS, PU, ​​PC, nylon, POM iyo PVC jilicsan
3. Samaynta nooc ka mid ah qaybaha silica silica:
Maaddada gel silica waa jilicsan tahay heerkulkiisuna dhalaalayo heerkiisu hooseeyo oo jilicsan yahay, sidaa darteed guud ahaan CNC ama daabacaadda leysarka 3D lama heli karo. Hababka ugu muhiimsan ee loo sameeyo nooc silikoon ah ayaa ah caaryada faaruqinta iyo qaab sameynta caaryada fudud.
Noocyada aan u sameynay macaamiisheenna waa sida soo socota ：
Noocyada Mashiinka CNC
Noocyada birta ah ee xaashida ah
3D noocyo kala duwan oo sintering ah
Noocyada silikoon ee ku shaqeeya caaryada faakiyuumka
Noocyada caaga ah ee CNC
Noocyada daabacaadda Laser 3D
Noocyo caag ah oo lagu buuxiyo faakiyuum
Noocyada silikoon ee qaab sameynta fudud
Daaweynta dusha sare ee noocooda
Oo ay ku jiraan daabacaadda 3D, farsamaynta CNC, dahaadhka dusha sare, rinjiyeynta iyo daabacaadda shaashadda xariirta ee moodalka qaybta caagga ah ee faakuumka ah.
Oo ay ku jiraan qaybaha birta, aluminium daawaha, zinc daawaha, qaybaha ahama wax soo saarka noocooda iyo rinjiyeynta, electroplating, qayilo, PVD iyo daaweynta kale ee dusha.
Mestech waxay leedahay koox injineero ah oo ku takhasusay naqshadeynta wax soo saarka, iyagoo siiya shirkadaha yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah iyo macaamiisha adeeg hal-joogsi ah oo naqshadeynta wax soo saarka ah, soosaarka noocyada alaabada ah, wax soo saarka caaryada iyo wax soo saarka caagga ah, wax soosaarka tirada badan iyo soo iibsiga wax soo iibsiga.